चिनियाँ टोली पेट्रोलियम खानी अन्वेषणमा जुटे, नेपाल मै पेट्रोल निकाल्न शुरुभयो काम ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/चिनियाँ टोली पेट्रोलियम खानी अन्वेषणमा जुटे, नेपाल मै पेट्रोल निकाल्न शुरुभयो काम !
यो समाचारसम्बन्धित भिडियो अन्त्यमा राखिएको छ।एकचोटी यो खबर पनि पढ्नुहोस,यो खबर पढ्न मन नभए अन्त्यमा सारेर भिडियो हेर्नुहोस, चिनियाको टोलीको सहयोगबाट नेपालकै पेट्रोल खानीबाट पेट्रोल निकाल्ने काम सुरु।कृपया अन्त्यमा हेर्नुहोला भिडियो
थप समाचार:कतारले ४ चरणमा लकडाउन खोल्ने भएको छ।यही जून १५ तारिख सोमबारदेखि लकडाउन खोल्न सुरु गरिनेछ । विपद व्यवस्थापन सर्वोच्च समितिका प्रवक्ता लोल्वाह राशिद अख्तरले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा यसको जानकारी दिएको गल्फ टाइम्सले लेखेको छ।उनले पूर्व सावधानीका उपायहरुले परिस्थितिलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताइन्।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
लकडाउन खुकुलो पार्न जून १५ देखि सुरु गरिनेछ । पहिलो चरणमा मस्जिदहरु खुल्नेछन् । दोस्रो चरण जुलाइ १ देखि लागू हुनेछ । तेस्रो चरण अगष्ट १ र चौथो चरण सेप्टेम्बर १ बाट लागू हुनेछ । दोस्रो चरणदेखि सानो परिमाणमा मानिसहरु जम्मा हुन दिइनेछ । दोसे चरणमा बढीमा १० जनासम्म जम्मा हुन पाइनेछ । तेस्रो चरणमा ४० जनासम्म जम्मा हुन दिइनेछ र चौथो चरणमा विवाह समारोह समेत आयोजना गर्न पाइनेछ।
पहिलो चरणमा मस्जिदहरु खोलिनेछ तर शुक्रबारको प्रर्थनाको अनुमति भने दिइने छैन । यो चरणमा निजी डुंगाहरु पनि प्रयोग गर्न पाइनेछ । दोहाबाहिर अत्यन्तै जरुरी उडानको मात्र अनुमति दिइनेछ । दोहा फर्किंदा यात्रु २ हप्ताको होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ र होटल खर्च यात्रुकै हुनेछ । पहिलो चरणमा पसल र शपिङ मलहरु आंशिक रुपमा खुल्नेछन् । कम्तीमा ३०० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएका पसल खोल्न पाइनेछन् । मलहरुमा कूल षमताको ३० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन पाइने छैन । कम्पनीहरुले २० प्रतिशत कामदारलाई काममा बोलाउन पाउनेछन्।
जुलाइ १ देखि दोस्रो चरण लागू हुनेछ । दोस्रो चरणमा सबै पार्क, समुद्र किनार र क्रोनिकलहरु खोलिनेछन् । यो चरणमा निश्चित समय र क्षमता लागू गर्दै मलहरु खुल्नेछन्। निश्चित संख्यासहित रेष्टुरेण्ट पनि खोल्न पाइनेछ । संग्रहालय र पुस्तकालय पनि निश्चित समय र क्षमतामा खुल्नेछन् । बढीमा १० जनासम्मको परिवारको लागि याटहरु भाडामा दिन पनि पाइनेछ भने बढीमा १० जनासम्मको समूहमा बाहिर खुला ठाउँमा प्रोफेनल ट्रेनिङको अनुमति पनि दिइनेछ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले क्षमताको ६० प्रतिशतमा स.चालन हुन पाउनेछन् भने कम्पनीहरुमा ५० प्रतिशत कामदार काममा आउन पाउनेछन्।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अगष्ट १ देखि तेस्रो चरण लागू हुनेछ । तेस्रो चरणमा ५४ मस्जिदहरुमा शुक्रबारको प्रार्थना गर्न पनि अनुमति दिइनेछ । कम जोखिमका उडानहरुसँग ड्राइभिङ स्कुल पनि संचालन हुनेछन् । मलहरु पूर्ण समय खुल्नेछन् । क्षमता केही बढाएर रेष्टुरेण्टहरु निश्चित समय खोल्न पाइनेछ । हेल्थ क्लव, जिम, स्विमङ पुल, ब्युटी मसाज पार्लर हेयर ड्रेसरहरु ५० प्रतिशत क्षमतासहित खोल्न पाइनेछन् । नर्सरी र चाइल्डकेयरहरु खुल्नेछन्, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु ८० प्रतिशत क्षमतासहित खुल्नेछन् भने कम्पनहिरुमा पनि ८० प्रतिशत कर्मचारी काममा जान सक्नेछन्।
सेप्टेम्बर १ देखि चौथो चरण सुरु हुनेछ र मस्जिदहरु सबैजसो खुला हुनेछन् । व्यवसायिक जमघट, ट्रेड शो सम्मेलनहरुलाई अनुमति दिइनेछ । सावधानीका उपायहरु अपनाउँदै सिनेमासहित मनोरञ्जन क्षेत्र पनि खुला हुनेछ । दोहा मेट्रो र सार्वजनिक बस पनि संचालन हुनेछ । उडान भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावअनुसार संचालन हुनेछ।चिनियाको टोलीको सहयोगबाट नेपालकै पेट्रोल खानीबाट पेट्रोल निकाल्ने काम सुरु।(भिडियोमा हेर्नुहोस)